“Dhallinyrada 10 ilaa 20 kun oo dollar ku bixinaya doorasho aysan oggeyn in ay helayaan, lacagtaasi maal-gashi ayey ku sameysan karaan” – Kalfadhi
October 6, 2020 October 6, 2020 Hassan Istiila
Xildhibaan Cabdi Cali oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa walaac xooggan ka muujiyay lacagaha diiwaan-gelinta musharraxiinta, u tar-tameysa kuraasta Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare.
Tusaale ahaan lacagta diiwan-galinta musharaxiinta u tartamaya Aqalka Sare, waa $20,000 (labaatan kun oo dollar) musharax kasta. Halka sannadkii hore ee 2016/17 ay aheyd $10 (Toban kun oo dollar) musharax kasta.
Mudane Cabdi Cali, ayaa sheegay in lacagtaasi tirada badan ee diiwaan-gelinta ay caqabad ku noqoneyso, dad badan oo dhallinyaro u badan oo han u lahaa in doorashada ay ka qeyb-galaan.
Lacagta diiwaan-gelinta oo 10 kun oo dollar ilaa 20 kun oo dollar ah, waa lacag aad u tira badan, qofka waxaa uu helayaa fursado kale oo uu maal-gashi ku sameysto.
Xildhibaanka ayaa aaminsan doorasho in la helaayo iyo in kale aan la oggeyn, lacgateeda diiwaan-gelintana ay aad u badantahay, labadaasi oo is-biirsaday waxaa ay ganaax ku yihiin dadka niyadooda ay ku jirto ka qeyb-galka doorashada ee aan awoodin bixinta lacagtaasi.